आवश्यकताभन्दा बढी चुनावको तनाव
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिआवश्यकताभन्दा बढी चुनावको तनाव
अचेल कन्टिर–बाबू आफ्ना भनिएका साथीभाइसँग पन्छिदा–पन्छिदा हैरान छन् । कारण पत्रकार प्रजातिलाई चुनावको रन्को मजैले लागिसकेको छ ।
चुनावको रन्को भन्नाले ओल्बाले वैशाख १७ र २७ गते प्रस्ताव गरेको चुनाव होइन । यो त अनिश्चित छ । कोही यो गर्नका लागि घोषणा गरिएको चुनावै होइन भन्छन्, कोही संसद् पुनःस्थापना हुने सम्भावना बढी छ, त्यस अवस्थामा चुनाव न सुनाव भनिरहेका छन् । कन्टिर–बाबूले ओल्बावाला चुनावको होइन, पत्रकारवाला चुनावको कुरा गरिरहेका हुन् ।
ओल्बावाला चुनाव अनिश्चित भए पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको २६ महाधिवेश सकिए भर्खरै सकिएकाले पत्रकारवाला चुनाव महासङ्घ स्थापना दिवस अर्थात् चैत १६ गतेको सेरोफेरोमा हुने निश्चितै छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कथम्कदाचित राजनीतिक हुदङ्गड सुरु भयो भने कुरा बेग्लै हो, अन्यथा चैतमा पत्रकारवाला चुनाव हुने कुरालाई इन्द्रेका बुबा चन्द्रे आए पनि टार्नसक्ने छैनन् भन्नेमा कन्टिर–बाबू निश्चिन्त छन् ।
त्यसैले महासङ्घको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहसम्मका लागि विभिन्न पदका आकाङ्क्षीहरूको सक्रियता अहिले निकै बढेको कन्टिर–बाबूले अनुभव गरेका छन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि कन्टिर–बाबूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भेट यी आकाङ्क्षीसँग भइहाल्छ । जिल्ला–जिल्लाका चोक–चौराहा, गल्ली–गल्लीका होटल रेस्टुरेन्टमा पत्रकारको जमघट हुने गरेको कन्टिर–बाबूले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । कतिपय ठाउँमा त उनी पनि आमन्त्रित हुन्छन् । आउन्न भन्न पनि गाह्रो । आखिर उनलाई सबभन्दा बढी काम लाग्ने यिनै समुदायका हुन् ।
कन्टिर–बाबूलाई अर्को समस्या पनि छ । उनी अहिले फोनमा अत्यधिक व्यस्त रहन थालेका छन् । अब तपाई सोध्नुहोला किन ? अरे यार तिनै चुनावी पत्रकारका कारणले नि ! न बेला हेर्‍या छ, न कुबेला भन्या छ । अर्काको मोबाइलमा घन्टी बजा’को छ, बजा’को छ । मोबाइल फोनमा तारन्तार आउने यस्ता घन्टीका कारण कन्टिर–बाबू हिजोआज बडो तनावमा छन् ।
घुमाइफिराइ सबैको कुरो एउटै हुन्छ– यसपटक नेतृत्वमा मलाई सघाउनुपरो भन्ने । विचरा कन्टिर–बाबूले तत्काल प्रतिक्रिया दिउन् कसरी ? ‘हुन्छ, ठिकै छ, तपाई अघि बढ्दा बेस हुन्छ, साथीभाइको चाहना पनि त्यस्तै बुझेको छु,’ आदि–इत्यादि सबलाई रेडिमेड कुरो भन्दा–भन्दा र झूठो बोल्दा–बोल्दा कन्टिर–बाबू हैरान छन् ।
आखिर झुठो बोल्नु र पन्छिनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि यार ? प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनका कुरा हुँदा हिजो दुलो छिरेका पत्रकारहरू पनि आज सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने भनेर अघि–अघि सर्दै छन् । कन्टिरबाबूलाई अहिले अधिकतर यस्तै उम्मेदवार आकाङ्क्षीहरूबाट तारन्तार सहयोगको आग्रह भइरहेको छ । कन्टिर–बाबू तिनलाई प्रत्यक्षतः घोचेर केही भन्दैनन् तर मनमनै प्रश्न गर्छन्– पत्रकारिता भने नगर्ने अनि पत्रकारको नेतृत्व खोज्ने ? कसरी सम्भव छ ?
चुनाव तनाव पत्रकार